Soo -saaraha iyo Alaab -qeybiye Shiinaha Radar Slip Sings AOOD
Nidaamyada raadaarka ee casriga ah ayaa si weyn loogu baahan yahay goobaha rayidka, militariga iyo difaaca. Faraanti isku -dhafan/isku -shaandheyn oo heer sare ah ayaa muhiim u ah gudbinta nidaamka ee signaalka RF, awoodda, xogta iyo calaamadaha korantada. Sida bixiyaha hal -abuurka leh oo hal -abuurka leh ee 360 ​​° xalalka gudbinta wareegga, AOOD waxay siisaa xalal isku dhafan oo kala duwan oo ah giraanta silsiladda korantada iyo isku -duwaha isku -wareegga/ hirarka mawjadaha macaamiisha rayidka iyo milatariga.
Wareegyada silsiladda radar ee isticmaalka madaniga ah waxay badanaa u baahan yihiin 3 illaa 6 wareeg oo keliya si ay u siiyaan awood iyo calaamado waxayna u baahan yihiin kuwo kharash-ku-ool ah. Laakiin adeegsiga milatariga giraanta silsiladda raadaarka ayaa leh shuruudo aad u adag.
Waxaa laga yaabaa inay u baahdaan in ka badan 200 wareeg oo loogu talagalay korontada iyo gudbinta calaamadaha kala duwan ee meel xaddidan, iyo tan ka sii muhiimsan, waxay u baahan yihiin inay buuxiyaan shuruudaha deegaanka ee milatariga qaarkood: heerkulka, huurka, naxdinta iyo gariirka, naxdinta kuleylka, joogga, boodhka/ciidda, ceeryaanta milixda iyo buufin iwm.
Labada shicib iyo milatariba waxay adeegsadaan siddooyinkii korantada korantada ee raadaarka waxaa lagu dari karaa hal/ laba kanaal oo isku -xira ama isku -xirayaasha wareegga mawjadaha ama isku -darka labadan nooc. Qaabka cylindrical-ka iyo qaabka xeedhada oo leh usheeda godan si ay ugu habboonaato nidaamka raadaarka ee baabuurka ku rakiban ama raadaarka raadka ee la heli karo.
Integrated Waxaa la dhexgalin karaa 1 ama 2 kanaal coax/waveguide rotary joint
Power Awood wareejinta, xogta, signalada iyo signalada RF iyada oo loo marayo xirmo isku dhafan
Solutions Xalal kala duwan oo jira
Shape Qaabdhismeedka iyo xeedhada waa ikhtiyaar
Solutions Xalka adeegsiga milatariga ee la jaray oo la heli karo
Combination Isugeyn dabacsan oo awood, xog iyo signal RF ah
Resistance Iska caabin hooseysa iyo dariiqa dadka oo yar
Shock Awoodda naxdin iyo gariir sare
■ Way fududahay in la isticmaalo
Rad Raadaarka hawada iyo raadaarka hagista hawada
Systems Nidaamyada raadaarka ee lagu rakibay gaadiidka ciidanka
Systems Nidaamyada raadaarka badda
Systems Nidaamyada baahinta TV -ga
Systems Nidaamyada raadaarka milatari ee go'an ama guurguura
Qaabka Kanaalka Hadda (amps) Danab (VAC) Caajis Cabbirka RPM
Koronto RF 2 10 15 Dheeca (mm) DIA × L (mm)
ADSR-T70-6 6 1 RF + 1 hirarka 4 2 380 70 138 x 47 100
Xusuusin: kanaalka RF waa ikhtiyaar, 1 ch RF isku -dhafan oo wareega ilaa 18 GHz. Xalal la habeeyay ayaa la heli karaa.
Hore: Kaabsoosha Kaabsulka Milatariga
Xiga: Iskuduwaha Rotary Coaxial
Giraanta Slip Ring Antenna
Wadajir Rotary Radar
Goleyaasha Sarkaalka Slip Slip
ADSR-JC-44 Difaaca Kaabsal Giraanta Slip Ring